Daawo: Kaalkaaliye macalin oo kuxigeen Ra’isalwasaare ka noqdey Somalia – SBC
Daawo: Kaalkaaliye macalin oo kuxigeen Ra’isalwasaare ka noqdey Somalia
Caawiye macalimiinta mid ka mid ah Iskuulada ku yaal magaalda London gaar ahaan waqooyigeeda ayaa iska casilay shaqadiisii ka dib markii si lama filaan ah loogu magacaabay kuxigeenka Ra’isalwasaaraha Soomaaliya.
Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim oo ahaa caawiye waxbarasho College-ka Newman Catholic College in Harlesden ee waqooyiga magaalada London ayaa hawshaasi waxbarasho ee caawinta macalimiinta wuxuu halkaasi ka wadey mudo 2 sano ah.
64 sano jir Ibrahim waxaa si lama filaan ah oo isagu xitaa qudhiisu uu aad ula yaabay uu u noqdey wasiirka arimaha dibada ahna Ra’isalwasaaraha Soomaaliya.
Madaxa macalimiinta Newman Catholic College Richard Kolka,wuxuu sheegay in uu aad ugu farxay markii uu maqlay warka ku aadan in mid ka mid ahaa shaqaalaha Iskoolka uu xilkaasi qabtey.
Mr Kolka wuxuu sheegay in markii uu dhamaaday sanad dugsiyeedkii sanadkan dhamaadkii bishii July aanu Maxamed Ibraahim wax war ah u hayn halka uu aadi doono.
“Warkan markii iigu horeysay ee maqlo waxay aheyd1 August markii mid ka mid shaqaalaha uu text massage ama fariin qoraaleed uu iigu sheegay in Mr Ibrahim xil loo magacaabay” ayuu yiri Mr Kolka.
“Maalmo ka dib waxaa e-mail ii soo direy Ibrahim wuxuuna ii sheegay in uu doonayo ruqsada shaqo ka tagiska oo aanu ku soo laaban doonin Iskoolka” ayuu hadalkiisa ku sii darey Richard Kolka .
Richard Kolka wuxuu ka hadley waxa Ibraahim uu e-mail-ka ku xusey waxaana uu yiri “Waxaa lama filaan ah la iiga wacay dalkeyga Soomaaliya, intii lagu jirey fasaxa Iskoolka, waxaana la ii magacaabay Ra’isalwasaaraha ahna wasiirka arimaha dibada, xili wadanka ay ka jirto dhibaato abaareed oo uu soo wajahayo abaar & cunto yari, waxaana haatanba bilaabay inaan hawshan la ii magacaabay xilkeeda guto, waxaan ka qayb galey shirkii Rome ee hay’ada cuntada & beeraha aduunka ee FAO, shirkii wadamada Islaamka ee Istanbul, & shirkii midowga Afrika ee abaaraha & gargaarka Soomaaliya”.
Iskoolkii uu ka shaqeynayey Mohamed
Maxamed Ibrahim wuxuu sheegay in uu waligiis xusuusan doono Iskoolkii uu kaaliyaha macalinka ka ahaa ee Newman Catholic College, isla markaana aanu ilaawi doonin jaalayaashiisii cajiibka ahaa.
Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim oo 64 sano jir ah wuxuu ka mid yahay ku dhawaad 200 qurbo joog Soomaali ah oo dalka dib ugu laabtey kuwaasi oo xilal kala duwan oo isagu jira Madaxweyne, Ra’isalwasaare, Wasiiro, xildhibaano & xilal kale ka haya maamulada kala duwan ee ka jira Soomaaliya sida Dawlada KMG, Puntland, Somaliland, Galmudug & kuwa kale, iyadoo xiligan ay u muuqanayso in darajooyinka ugu badan ee maamuladaasi ay ku fadhiyaan qurbo joog harqiyey qaran joogii.
Link Video hoose ka daawo wareysiga Ra’isalwasaare kuxigeenka & dugsigii uu macalinka ka ahaa & waliba ardeydii uu caawin jirey.
Wa wax lagu farxo inu xil ka qabto wadankisi hoyo si u usamata bixiyo umada wana loga fadhiya mr ibrahiim ilah hala garab galo amiin
waa wax aad looga naxo in somaliya ay noqoto mid aan madaxnimadeeda loo soo Marin wadada dawladnimo allow wax magaratada ka qabo dalka